Aniga oo Muqdisho ka tagay ayaan booqasho u aaday Miyiga Degmada Xarar-dheere ee Gobolka Mudug, halkaasoo uu degganyahay Adeerkeey aan Dadka ugu jecelahay.
Adeerkey, inkasta oo uu Waalid ii yahay haddana Saaxibbo ayaan nahay. Marki uu magaalada usoo muraad-tago, Aniga iyo isagu badanaa kalama harno.
Galab inaga oo ag mareyna ayuu iiga sheekeyey Waagaas oo uu ahaa Wiil yar oo Ciyaal Dambiil ah.
Aniga oo dhowr maalmood jooga aadna ula dhacsan buuq la’aanta Dhulka miyiga ah, maskaxdu ii degtay oo sidaan Caano-geel oo Dhaay ah u cabayey wixii caloosheyda ku jiray dhigay, ayuu Adeerkey Farriin isoo gaarsiiyey. Waa xilli qorrax dhac ah oo wixii Ari ah ee bannaanka jira lasoo xero galinaayo.
“Reer Meyta-kaal qaba ayaa na wacay oo aan caawa adeynaa, marki Xooluhu Xera galaan ee la soco” ayuu igu yiri. Meyta-kaal waa Xus ama SAB marki magaalada la joogo.
Annaga oo sidii u sheekeysaneyna ayaan u tagnay Rag fadhiya meel Geedo laga jafay oo aad u dugsoon.
Salaan iyo is marxabbeyn ka dib, gogol fidsan ayaan galnay. Rag odayaal u badan ayaa laba labo u sheekeysanaaya, kuwo jilbaha Go’oodii ku garwaaxeystay oo aan is iri ‘ waa Culimo’ ayaa Tusbaxa laba rogaya oo Wardi akhrisanaaya iyagoo aan sheekada ku jirin.
Naar/ Qabaal weyn oo Hilbo ka buuxaan ayaa haddana lasoo dhigay markaasaa Nin toorreey gacanta ku heysta uu goobeynayaa…qeyb qeyb ayuu u dul dhigayaa Sad ama Maqaarka Lo’da oo geeskiisa ku waran.
Ninki ayaa intuu igu soo rogmaday oo Wajigeyga fiiriyey sida Qof uu garanaayo oo kale igu yiri ” kaalay Adeer, labo Wiil oo Hilibka ka caaggan ayaan kugu saddaxeynayaa” markaasuu badar iyo suusac Geel nasoo dhax dhigay. Iga tag……Odayaashiba ka reystaye.